China Iji igwe anaghị agba nchara Strapping rụpụta na Factory | Daren
Ọ nwere ọtụtụ ngwa dị iche iche na ike eletrik na ike ọkọnọ sistemụ. E gosipụtara uru ya na:
1. Ngwongwo igwe anaghị agba nchara anaghị egbochi ụdị na oke nke ihe a ga-ekekọta;
2. Nhazi usoro dị mfe na-eme ka ihe dị mgbagwoju anya nke ọdịnala ọdịnala dị mfe;
3. fastrụ ọrụ dị mma nke ọma na-eme ka nchekwa nke ihe ndị ahụ ejikọtara;
4. Igwe anaghị agba nchara eriri agbatị bụ mgbochi corrosive na nnukwu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ ihe iji hụ na gburugburu ebe obibi mara mma na nchekwa ọkụ chọrọ;
Ngwa nke igwe anaghị agba nchara USB agbatị na akpakanamde ụlọ ọrụ:
1. Ihe mkpuchi mkpuchi maka ọkpọkọ ikpochapu ụgbọala. Ojiji nke eriri eriri karịa usoro ịgbado ọkụ nke ọdịnala na-ezere nsogbu nke nrụgide na-agbasa ebe mgbado ahụ n'ihi mgbasawanye nke ọkụ. Mee ka ndụ nke ihe mkpuchi ikpo ọkụ dị ndụ ma melite ntụkwasị obi. Usoro ntinye dị mfe na-ebelata ego nke ọkpọkọ ikpochapu.
2. coverjá mkpuchi maka ụgbọala ụgbọala aro. Igwe anaghị agba nchara eriri eriri ngwaahịa nwere uru nke na-ejedebeghị site nha, nke na-ebelata ngwa ahịa ewuru n'ihi nha dịgasị iche maka ụlọ ọrụ na-emepụta akụ mbanye. Ọdịdị dị mfe na ike a pụrụ ịdabere na ya dị elu na-enye arụmọrụ dị mma maka ihe mkpuchi uzuzu nke oghere ụgbọala.
3. busgbọ ala breeki. Ngwa igwe anaghị agba nchara na-ejide n'aka na ntụkwasị obi nke bọs breeki ụgbọ ala ya na eriri igwe anaghị agba nchara. N'otu oge ahụ, a na-echebe elu nke ụgbọ ala ahụ ka ọ ghara imebi emebi.
4. akpa ikuku. N'ime idozi akpa ikuku ụgbọ ala, arụmọrụ kwesiri ntụkwasị obi nke ikuku ikuku.
5. Ejiri ya na mmiri mmiri ụgbọ mmiri na ọkpọkọ mmiri na ọkpọkọ ikuku, eriri igwe anaghị agba nchara na-ekwe nkwa akara, nchekwa na ntụkwasị obi nke ọkpọkọ ahụ nwere ezigbo mmachi.
Ọdịdị nke eriri igwe anaghị agba nchara na akara na akara ngosi:
1. Amaghị oke site na ọdịdị elu na oke nke ihe a ga-eke;
2. performancerụ ọrụ nke ọma na-eme ka njigide nke ihe ịrịba ama ahụ kwụsie ike na nchekwa;
3. Mfe Ọdịdị na elu-ike strapping belata na-eri nke ọchịchị ọchịchị;
4. Nhọrọ nke igwe anaghị agba nchara mara mma gburugburu na ọchịchị obodo;
Igwe anaghị agba nchara eriri agbatị na ọtụtụ-eji dị iche iche ubi nke ụlọ ọrụ. Ahịa ụlọ ọrụ, pipeline ụlọ ọrụ, ihe ịrịba ama ụlọ ọrụ, ụlọ elu mmiri mmiri na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nwere arụmọrụ dị mma.
1. Igwe anaghị agba nchara eriri eriri ngwaahịa na-enye ngwaahịa nke 304SS, 201SS, 316SS, 317L, Monel na ihe ndị ọzọ iji hụ ihe achọrọ pụrụ iche nke ụlọ ọrụ maka mgbochi corrosion na nchekwa ọkụ;
2. Ọrụ nrụgide dị elu na-eme ka nchekwa nke mmepụta ihe;
3. Usoro ntinye dị mfe na-enye adaba maka nrụnye ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-emeziwanye arụmọrụ ọrụ, ma na-enye Nchedo maka njikwa ọnọdụ mberede.
4. Ngwunye eriri igwe anaghị agba nchara na mkpuchi ọkụ na mgbochi corrosion na-eme ka nchekwa nke eriri ụlọ ọrụ. Soro
Na-akwado nchekwa nchekwa na ichedo gburugburu ebe obibi
Igwe anaghị agba nchara eriri eriri ngwaahịa na-egosi uru dị ike na ụlọ ọrụ ọkpọkọ.
1. Nwere ike ikpo ọkpọkọ nke ọ bụla dayameta;
2. uniquedị eriri pụrụ iche pụrụ iche nwere akara nke ọma na ọnọdụ nkechi, na-eme ka itule nke nrụgide dị na njikọ niile nke agbatị ahụ;
3. Nha nke ihe nkedo a na-emezi emezi ka arụmọrụ nke pipeline dịkwuo mma;
4. Belata ngwa ahịa nke ọkpọkọ clamps, prefabricated pipe clamps nwere ike ịkpakọba ọ bụla ọkpọkọ obere karịa nha ya;
5. Ngwá ọrụ eletriki dị elu na-arụ ọrụ nke ọma na ihe ọkụkụ, na ime mgbanwe nke nrụgide na-eme ka nrụgide na nkwụsi ike nke ntinye ahụ sie ike.
Ọ na ọtụtụ-eji ke idozi ime ụlọ nkwurịta okwu Gịnị na n'èzí nkwurịta okwu Gịnị.
1. Ngwunye eriri igwe anaghị agba ncha na-ekwe nkwa nchekwa nke eriri nkwukọrịta ya na ezigbo mma ya;
2. Ngwongwo eriri igwe anaghị agba nchara na-edebe ohere maka mmụba ọkụ nke eriri, nke na-eme ka mmachi a pụrụ ịdabere na ya ma n'otu oge ahụ na-achọpụta na a naghị ehichapụ elu ya;
3. Ihe mkpuchi mkpuchi mkpuchi ọkụ na-enweghị atụ na nke pụrụ iche na-eme ka arụmọrụ ọkụ na nchekwa nke eriri USB sie ike.
N'ihi na pụrụ iche chọrọ na ụgbọelu ubi, igwe anaghị agba nchara USB agbatị nwere pụtara ìhè arụmọrụ.
1. Pụrụ ịdabere na igwe anaghị agba nchara cable tie agbatị hụ na nchekwa nke ugbo elu Gịnị na ọnọdụ ọjọọ;
2. Nhọrọ nke ihe ọkụ ọkụ na-emezu ihe ndị ụlọ ọrụ ụgbọelu chọrọ;
3. The pụrụ iche patented USB nchedo imewe na-ekwe nkwa na USB elu mgbe huu USB na-fastened;
4. Igwe anaghị agba nchara eriri agbatị na-eme ihe dị mma na ọdụ ụgbọ elu mmanụ na pipeline ikuku.